abafundi bafumana ii-airpods zasimahla nge-ipad pro okanye nge-ipad yokuthengwa komoya ngexesha lokunyusa
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Abafundi bafumana ii-AirPods zasimahla ngePad Pro okanye ngokuthengwa komoya kwe-iPad ngexesha lokunyusa
Abafundi bafumana ii-AirPods zasimahla ngePad Pro okanye ngokuthengwa komoya kwe-iPad ngexesha lokunyusa
Kuvakala ngathi unyaka wesikolo uphelile nje kwamanye amazwe kwaye sele apile ukhumbuza abafundi ukuba ukuqala konyaka wesikolo olandelayo kusondele. Ingxilimbela yezobuchwephesha ibhengeze isivumelwano sayo sokubuyela eSikolweni ngo-2021 kwaye ibandakanya isibini sasimahla see-AirPod ngokuthenga isixhobo esifanelekileyo seMac okanye se-iPad. Ukuba umfundi ufuna ukuhlawula ngaphezulu, unokuguqula ii-AirPods zasimahla zibe yi-AirPods Pro yasimahla ngeNdawo yokuCinywa kwengxolo eSebenzayo kunye neMowudi yokuBonisa ngaphaya.
Ii-AirPods zasimahla ziyafumaneka ngokuthenga i-iPad Pro (2021) okanye i-iPad Air (2020). Isivumelwano sikwabonelelwa ngokuthengwa kwe-iMac, iMac mini, iMac Pro, iMacBook Pro kunye neMacBook Air kubandakanya iimodeli zesiko ezakhelwe-ngokulandelelana.
I-Apple iPad Pro 11-intshi (2021)
I-intshi ye-11 intshi ye-iPad Pro (2021) kunye ne-second-gen AirPods
Isipho$ 749Thenga kwiApple
IPad Air (2020) kunye neeAirPods
Isipho$ 549Thenga kwiAppleNgokwazisa, abafundi bagcina i-159 yeedola ukuze bafumane ii-AirPod zesizukulwana sesibini zasimahla ezinetyala elinentambo. Ukutshintsha ityala lokutshaja ngaphandle kwentambo kuya kubiza i-40 yeedola, kwaye i-90 yeedola umfundi unokuhlaziya kwi-AirPods Pro ngecala lokutshaja ngaphandle kwamacingo.
UApple usungula ukubuyela eSikolweni ngo-2021 Ngaphandle kokuxhamla kwii-AirPods zasimahla okanye ukunyusa amaxabiso asezantsi, iApple inika umfundi isaphulelo se-5% -10% kwixabiso lesixhobo esifanelekileyo abasithengayo. Umzekelo, i-11-intshi ye-iPad Pro (2021) enamaxabiso emfundo yi- $ 749. Ke kude kube nge-27 kaSeptemba xa unyuselo luphela, abafundi banokufumana amanqaku kwi-M1 ithebhulethi kunye ne-AirPods yohlobo lwesibini enetyala elinentambo ye- $ 749.
Okwangoku i-Promo yokubuyela eSikolweni ifumaneka kuphela kumazwe nangona ngokwesiko i-Apple ibandakanya ezinye iimarike, njenge-UK, kwiiveki ezimbalwa emva kokumiliselwa kwe-US.
zenziwe njani iimeko ze-iphone zesiko
Elona bali liqhutywa yimidlalo ye-android simahla
Iphone 7 plus bumper kuphela
I-Samsung Galaxy Watch 4 kunye neApple Watch Series 7 zinokuzisa impumelelo enkulu kulo nyaka
Ixabiso le-Samsung Galaxy S7 kunye ne-S7 Edge, umhla wokukhutshwa, kunye noku-odolwa kwangaphambili kwebhonasi
UGoogle wayecwangcise kwasekuqaleni kubandakanya i-premium buds zeendlebe ngePixel 2 kunye nePixel 2 XL
Idatha ye-Apple Health inokwabelwana ngokuthe ngqo nogqirha kunye nosapho kwi-iOS 15
Iindlela ezahlukeneyo zokwenza iMephu eJava
I-Samsung & apos; yakudala i-Galaxy S6 kunye ne-S6 Edge basafumana uhlaziyo lwesoftware
Ixabiso elitsha le-Apple iPad 9.7 '(2018, 6th gen) kunye nomhla wokukhutshwa